Peninsula Bukit " Journey-Assist - Ny malaza indrindra amin'ny Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Bukit
Bukit dia faritany malaza indrindra any Bali
Zazavavy iray ao amin'ny faritra atsimon'i Bali izy io. Io no faritra be mpitia indrindra ao amin'ireo mpizahatany amin'ny nosy.
Ny velarantanin'i Bukit dia 104 sq. Km. Ny anarana Bukit dia adika ara-bakiteny amin'ny teny indonezianina hoe "Hill". Ny ampahany malaza amin'ny Bukit dia ny faritra atsinanana - Nusa Dua.
Somary maotina ihany ny refin'i Bukit. Miaraka amin'ny velarany 104 sq. km. Manana ny halavany avy any atsinanana ka hatrany andrefana, 15 km eo ho eo, ary avy any avaratra ka hatrany atsimo, manodidina ny 8 km.
Zavatra tokony hatao ao Bukit
Bukit dia toerana tsara fitetezana rano satria misy toerana fialokalofana kilasy eran-tany amin'ny moron'ny andrefana. Ny malaza indrindra amin'izy ireo dia Uluwatu sy Padang-Padang.
Na izany aza, ny toeran'i Bukit dia miavaka amin'ny onja lehibe, haingana ary maranitra, izay tsy azo atao akory raha mitaingina Surfer vao manomboka. Mety ahiana ihany koa ny maratra, satria ny ankamaroan'ny toerana Bukit dia vaky vatohara, eo am-pototry ny tsirairay amin'izy ireo dia misy haran-dranomasina maranitra. Bukit dia mety kokoa amin'ny mpitsangantsangana efa za-draharaha.
Bukit dia manana torapasika tsara tarehy maro. Ireto ny Dreamland, Balangan, Uluwatu, Binjin ary Pandava.
Ny Balangan dia manintona amin'ny mety hisian'ny efitrano iray amin'ny tranobe misy mololo, mijoro amin'ny tohatra eny amoron-dranomasina, mba hankafizantsika torimaso tsara amin'ny feon'ny onjan-drano sy fialam-boly mankafy ny ranomasina.
Na izany aza, ny alina amin'ny foto-kevitry ny teny rehetra amoron-dranomasina dia manomboka avy hatrany aorian'ny hilentika ny masoandro. Indrindra indrindra, aorian'ny ora 19 amin'ny Binjin dia mihodina ny jiro. Balangan dia niditra tao anaty haizina ary natory 20 ora.
Bukit dia manana trano fandraisam-bahiny sy villa maro be manana fomba fijery ranomasina. Misy trano tsy dia lafo, fa amin'ny fotoana iray dia somary trano mendrika.
Bar "Single Fin" Single Fin
Eo akaikin'ny Hotely Blue Point any Uluwatu, eo amin'ny hantsam-bato no misy ny Single Fin, fisotroana misy fety mahafinaritra sy mozika mivantana ny alahady. Azonao atao koa ny mahita ny filentehan'ny masoandro eto.
Filentehan'ny masoandro avy amin'ny Single Fin Bar
Ao ambadiky ny seranam-piara-manidina, mizotra mankany Bukit, misy ny tanàna kely an'i Jimbaran, izay eo amoron'ny morontsiraka, antsoina koa hoe Jimbaran. Ity misy fasika fasika fotsy. Ny antsasaky ny morontsiraka misy azy dia teren'ny mpanjono. Vitsy ny olona eo amin'ny Jimbaran Beach, raha ny ranomasina kosa milamina amin'ny ankamaroan'ny fotoana. Mandritra ny onja mahery, rehefa misy onja be loatra, na tsy mandeha tsara ny onjam-peo dia misy onja izay mety tsara hahafantarany ny fomba hikoratana.
Misy hotely misy kintana 5 any Jimbaran. Saika tsy misy safidy hafa an-trano eto, afa-tsy ireo villa avo lenta, izay hita eo amin'ny havoana iray izay ahafahanao mankafy ny fomba fijerin'ny tapany atsimon'i Bali. Jimbaran dia fantatra ihany koa amin'ny tsena izay mivarotra trondro sy hazan-dranomasina vao maraina. Eto ianao dia afaka mahita trano fisakafoanana maro izay manolotra lovia matono amin'ireto an-dranomasina sy trondro ireto.
Nusa Dua any Bukit
Any atsimoatsinanan'i Bukit dia i Nusa Dua, izay faritany voafetra ary tsara tarehy.
Na aiza na aiza ianao dia afaka mahita ilay voatoto famafazana, ary eo amin'ny fidirana ny fiara sy ny bisikileta hodinihina. Misy trano fisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny maro, misy torapasika tsara ihany koa. Ao anaty vanim-potoana i orana dia misy ireo faritra midina.
Ny fatiantoka lehibe iray any Bukit dia, ankoatry ny fialantsasatra amoron-dranomasina sy ny fitetezana onja, dia saika tsy misy azo atao eto. Ho an'ny fiantsenana sy fety dia adiny iray eo ho eo vao mankany Seminyak na Kuta. Ankoatr'izay, manomboka eto dia lavitra kokoa hatrany amin'ny faritra afovoan'i Bali, izay "manankarena" manintona. Ary ireo mpizaha tany tonga voalohany tany Bali dia hahita fa tena sarotra ny mivezivezy eto amin'ny voalohany, satria misavoritaka loatra ny lalana any Bukit na dia ny fenitra any Bali aza.
Zavaky ny any Bukit
Ao amin'ny faritanin'i Uluwatu dia tempoly iray, antsoina koa hoe Uluwatu ary iray amin'ireo sivy sivy ao Bali. Ny tranobe dia miorina eo amin'ny harambato mirefy 40 m ny haavony, izay ahitana toby ranomasina tsara tarehy. Biby maro be no mipetraka ao sy manodidina ny tempoly, miezaka hatrany hangalatra zavatra avy amin'ny mpitsidika. Mila miambina ianao. Mandritra ny filentehan'ny masoandro dia atao eto amin'ity tempoly ity ny dihy Kecak.
Dance Kechak ao amin'ny Tempol Uluwatu
Tempolin'i Uluwatu any Bukit
Garuda Vishnu Kensana Park
Valan-javaboary midadasika manarona velaran-tany 240 hektara.
Garuda Vishnu Kensana Park. Tsangambato andriamanitra vishnu
Garuda Vishnu Kensana Park. Sarivongan'i Garuda. Voromahery antsasaky ny lehilahy iray
Weather in Bukit androany
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, orana any Bukit. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.